EU haidi Starlink's satellite internet uye vanosarudza kugadzira yavo | Linux Vakapindwa muropa
European Commission yakaburitswa Mazuva mashoma apfuura iyo yakasarudza mubatanidzwa wevanogadzira satellite nevashandisi, muterevhizheni opareta uye muEuropean anotangisa sevhisi kuti aongorore dhizaini, kuvandudza uye kuvhurwa kwenzvimbo yakazvimirira yeEuropean yekutaurirana system.
Ichi chidzidzo chakatumirwa kumazita makuru eEurope senge Airbus, Thalès, Orange kana Eutelsat kugadzira European satellite Internet service yakanangana nekusimudzira hupfumi hwedigital uye kudzikisa dhijitari.
Icho chitsva chirongwa chakanangana ne kusimbisa iyo Kutonga kwedhijitari kweEurope inoziviswa seSpaceX inotarisira kupa yakapararira-refu satellite satellite kuwana kuburikidza neayo Starlink sevhisi.
Iyo feasibility kudzidza inotarisirwa kugara gore rimwe chete, ichidhura 7,1 mamirioni euros uye inoitirwa kuronga yakasununguka nzvimbo yekutaurirana system yakanangana neEuropean Union. Consortium yevanogadzira satellite uye vanoshanda, muterevhizheni opareta uye muEuropean anotangisa sevhisi anopiwa basa rekudzidza dhizaini, kuvandudza uye kuvhurisa kweEuropean space yekutaurirana system.
Chinangwa yechidzidzo ichi ndeyekuongorora kushanda kwechirongwa chitsva ichi chakanangana nekusimbisa hutongi hweEuropean dijitari uye inopa kubatana kwakachengeteka kuvagari vayo, makambani ezvokutengeserana nemasangano eruzhinji.
Kunge chirongwa cheStarlink, chirongwa ichi chichavawo nebasa rekupa kufukidzwa kwepasi rose kwenzvimbo dzekumaruwa uye dzevachena. Kana yambosimbiswa, iyi nyowani yeEuropean Union mureza wepurojekiti, inoenderana nezvirongwa zveCopernicus neGalileo, ichashandisa zvakazara ma synergies uye kugona kwetekinoroji kwemaindasitiri edhijitari uye emuchadenga, akanyora Orange, mumwe wehofori dzeEurope.
"Chinangwa chechidzidzo ichi ndechekuongorora kushanda kwechirongwa ichi chitsva chakanangana nekusimbisa hutongi hweEuropean nekupa kubatana kwakachengeteka kuvagari vayo, makambani ayo ezvokutengeserana nemasangano ehurumende," inoratidza European Union. Uye kuratidza kuti ino sisitimu nyowani ichave, saStarlink, nekudana "kuverengera kufukidzwa, pasirese, kwenzvimbo dzekumaruwa nenzvimbo dzevachena".
Iwo mahunyanzvi emagetsi akasarudzwa neBrussels kuita chidzidzo ichi ndeaya: Airbus, Arianespace, Eutelsat, Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio neThales Alenia Space. Zviri kwavari kugadzira ramangwana reEuropean space system inokwanisa kupa nhare dzekutaurirana dzakachengeteka kuEU States States States, "pamwe nekubatana kwebandaneti kwevagari veEuropean, mabhizimusi uye zvikamu zvekufamba, nokudaro vachisimbisa hutongi hwe digital. HweUnited".
"Chikamu chekudzidza chakapihwa neEuropean Commission chichajekesa zvakanyanya zvinodiwa nevashandisi, chinangwa chehurongwa, dhizaini yekutanga uye dhizaini yekuendesa sevhisi, pamwe nekufungidzira bhajeti inoenderana," Commission yakati. European. "Chirongwa cheveruzhinji-chakazvimiririra kudyidzana (PPP) chichaongororwa uye kuongororwa panguva ino."
Chidzidzo ichi chichaongorora kuti ino space system ingavandudza sei zvakakosha zvivakwa, zvazvino uye zvenguva yemberi, kusanganisira pasi network.
Izvo zvakare ichaongorora maitiro ekubatanidza kune izvi zvigadzirwa kusimbisa masimba eUnited yekuwana gore uye nekupa masevhisi edhijitari zvakazvimiririra uye zvakachengeteka, hunhu hwakakosha hwekuvaka kuvimba muhupfumi hwedhijitari uye nekuona kuzvidzora kweEuropean uye kusimba. Iyo purojekiti yakatangwa neEuropean Commissioner for Indasitiri, Thierry Breton, aimbova French Director weTekinoroji uye Gurukota rezveMari.
Vakuru veEuropean Union vakabvumidza ongororo yeboka renyeredzi rezasi-kombi rakafanana neStarlink iyo yaizopa hurumende kutaurirana kwakachengeteka uye kuunza Internet service kunharaunda dziri kure Kuvandudza boka renyeredzi zvakadaro kwaizoita kuti Europe isanyanye kutsamira pahunyanzvi hweChinese neAmerica mune izvo zviri kubuda senge nyowani yepasi-orbit nzvimbo mujaho.
Basa racho rinogona kukurudzirwa nezvirongwa zviripo zveEuropean kutenderedza hurumende satellite satellite kutaurirana uye huwandu hwehunyanzvi. Muhurukuro yakapihwa Nyamavhuvhu apfuura, Breton akataura nezvo kudikanwa kweyeredzi reEuropean "iro rinobvumidza Europe kuwana mukana wechengetedzo unopihwa nenzvimbo-yakavakirwa quantum cryptology."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EU haidi Starlink's satellite internet uye vanosarudza kugadzira yavo
Ivo vatove vakafanana nemaChinese, maRussia uye maSocialists / maCommunist nguva dzese nekuve ne "yavo" kunyangwe ichisveta.